Laha-janahary - Nalison Randrianaivo - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
Laha-janahary - Nalison Randrianaivo
Lala: Izaho aloha rehefa lehibe dia hanambady an'ireny mpanambola be ireny sy ireny mpanankarena be ireny, Tsy mba hanambady izany izaho raha tsy ireny.
Saholy: Indry ity kia ka. Dia ahoana izany raha tsy hoe tsy izay no tonga eo, Dia tsy hanambady indry?
Sa hiandry izay olona manankarena eo ihany tsy ho antitra ampitaorana eo ve raha izany.
Lala: Aza matahotra indry fa tsy maintsy tanteraka izany e, Ho hitan-dry eo tsara fa i Lala sy 4x4 beany no tazan-dry atsy ho atsy, Ary indry io mihintsy no ampirevo any amin'ny hotel sy restaurant ary izay tiandry sy tadiavin-dry mihintsy.
Saholy: Eny indray ary koa.
Hitako eo ary izany a
Fa enga anie mba ho tanteraka izany hihinana sakafo be sy jus be. Kany e
Lala: Hita kia kou, Sady izaho izany efa te handehande boite sy discotheque be mihintsy izany, fa miaraka amin'ny sipako vazaha be na ireny minisitra mpanambola ireny
Saholy: Izany ah
Ary mitovitovy ihany isika sy indry a
Izaho koa manko toy izany an'indry izany koa
No ny taty aoriana ary tokoa ary tsy nampoizina ny zavaniseho fa nifamadika tamin'izay fanirianan'i Lala sy saholy izay no zavanisy, Izay nanambady i Lala fa tsy arak'izay noteneniny akory no tonga taminy. Nisy tovolahy kely izay niaraka taminy izay azo lazaina fa olona sahirana satria irony mpivarotra epicerie irony no asan'ny dada sy nenin'ilay tovolahy,
i Rivo moa no anarany sy fiantso azy.
Saholy: Fa inona ity nahazo an'indry e
no olona tahak'itony no vadiana, olona sahirana nefa jereo ity indry sady taviny no volony tsara tarehy amam-bika.
Lala: Ka atao ahoana ary kia
Io no tonga teo ary ekeko fa laha-janahy io, fa tsy hoe tonga tonga fotsiny, izao no tena marina e tiako izy ka tsy jereko izay fiainany na manankarena izy na mahantra dia tiako izy, moa izy koa moa tia ahy
ka tafaray ny tia sy tiana.
Saholy: Indry ity tena adala mihintsy kia a
mba dinio anie hoe naniry olona indry nefa tsy ilay hirian-dry no tonga teo dia eken-dry ve?
Mba mieritrereta ihany akia
Raha izaho no tahaka an'indry dia esoriko any io zaza io, io ve no anakana an'indry tsy hanoy ny fiainana milay miaraka amin'ireny bandy akama bonne be ireny e.
Dinio anie izay e
Taraiky eo indry a
Lala: An an an kia
Tsy alako izany io, matoa manko io nisy dia sitrak'Andriamanitra no nisiany tao sy ny hivelomany ka aleo ny ahy tezaiko sy velomiko, sady ny rainy koa anie akia efa miasa dia vonona hamelona anay e.
Efa laha-janahary izao akia a, ka tsy azo idovirana tsy azo iadian-kevitra e
Saholy: Aaa ka, indry ity koa sarotra atoro ka tiavo sy hajao eo ny vady aman-janak'indry e, aleo izaho handeha fa mandany fotoana fotsiny ny miresaka amin'indry ity, izay fa aleo izaho hanohy ny fiainako fa hiverin-dalana izany, mazoto indry
Lala: Tsy maninona izay filazan'indry e, tiako fotsiny ny vady aman-janako ka tsy alako amiko izany zareo, ka mandehana tohizo ny dia raha toa indry mbola hanohy e
Ny ahy ity efa laha-janahary e
Daty : 12/05/2018
Mpamangy : 274